प्रितम सुवेदीलाई दुर्गा प्रसाईंको धम्कीः तेरो तीन इन्च छाला सर्ने गरी हान्छु ! – Life Nepali
प्रितम सुवेदीलाई दुर्गा प्रसाईंको धम्कीः तेरो तीन इन्च छाला सर्ने गरी हान्छु !
काठमाडौँ । झापास्थित प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँले डा.गोविन्द केसी अभियानका मिडिया संयोजक प्रितम सुवेदीलाई फोन गरेर भौतिक आक्रमणको धम्की दिएका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
उनले सुवेदीमाथि तथानाम गाली गरेका छन् । केही दिनअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले चोर बाटोबाट अवैध रुपमा उनको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेको भन्दै डा. केसीको अभियानका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको थियो । लगत्तै उनले सुवेदीलाई फोन गरेर धम्क्याएका हुन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
उनले सुवेदीलाई, ‘तँलाई भेटें भने तेरो नि तीन इन्ची सर्ने गरी हान्दिन्छु ।’, भन्दै धम्की दिएका छन् । साथै बाबु, आमा र बहिनीको नाम लिँदै सुवेदीलाई ‘डाँका’ लगायतका अपशब्द बोलेका छन् । आक्रोशित हुँदै प्रसाईंले भनेका छन्, ‘तेरो बाउले दिन्छ बैंकको ब्याज । तेरो आमाले तिर्छ। तेरो बहिनीले तिरिदिन्छ ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
सुवेदीले यस्तो अपशब्द बोल्ने भए फोन राख्नुस् भन्दा उल्टै प्रसाईंले मैले धेरै खपे भन्दै धम्की दिएका छन् । ‘तँ इन्जिनियर। तँसँग डबली खोल्ने पैसा कहाँबाट आयोरु तँ आफ्नो ठाउँमा बस्। नहाँस्,’ प्रसाईंले भने ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
उनले मापदण्डको कुरा उठाउँदा सुवेदीले तपाईंले मापदण्ड पूरा गरेको के आधार छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । फेरि आक्रोशित हुँदै प्रसाईं भन्छन्, ‘तँ को होस् मापदण्ड भन्नलाई । त कानुन, राज्य होस् किरु मैले संविधानमा रहेर देशमा उद्योग धन्दा खोल्न पाउँछु । तँ मलाई चोरबाटो भन्ने । मेरो अगाडि परिस् भने म तलाई चोरबाटो देखाइदिन्छु । तेरो बाउआमा राखेर तँसँग कुरा गर्छु। तेरो बाउआमा काँ छन्रु त धेरै नबोल भाइ । भेटे भने तेरो तीन इन्च छाला सर्ने गरी हानिदिन्छु । साला डाँका ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
अभियन्ता सुवेदीलाई धम्क्याउने र अपशब्द बोलेको प्रति सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले कडा निन्दा गरेको छ । ‘नागरिकहरुको ज्यूधनको सुरक्षाका लागि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता गुण्डागर्दी र अवैध कार्यलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेपछि नागरिकले सुरक्षाका लागि कसको मुख ताक्ने भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ ।’, अलायन्सले भनेको छ । छट्टै प्रसाइँविरुद्ध उजुरी दिने पनि अलायन्सले बताएको छ । अडियो रकेर्ड नेपाल समय अनलाइनबाट साभार गरिएको हो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**,
Previous दाइलाई चाहिएको थियो पाँचौँ बच्चा, बहिनीले ग’र्भ बोकेर जन्माइ दिईन !
Next यी छात्राले स्कुल झोला भिरेर गरेको जिम्न्यास्टिक भाईरल,मन्त्रीले पनि शे`यर गरे सो भिडियो (भिडियो सहित)